6 x ကို 13
ကို C စမ်းသပ်° +60 အထိ 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အပူချိန်စက်ဘီးစီးစမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်အိုမင်း, ချေးခုခံစမ်းသပ်စသည်တို့ကို - အားလုံးအသင်းတော်များမှအထိအပူချိန်နှင့်အတူစစ်ဆင်ရေးအတွေ့အကြုံဆန့စမ်းသပ်မှုလွန်
တပ်ဆင်မှုအတွက်ညှပ်ရဲ့ shell ကိုတစ်ခုဝေဟင်တစ်စက်ဝါယာကြိုး cable ကိုထားတော်မူ၏။ cable ကိုဆန့်ကျင်, ကြီးပြင်းဖောင်းကြွနှင့်အတူ optical fiber ကိုထိပ်သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းကေဘယ်လ်ပေါ်မှာတင်းမာမှုညှပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထားပါ။ shell ကိုအတွက်သပ်ထည့်ပါ။ တစ်စက်ဝါယာကြိုးချိတ်အပေါ်အာမခံဝါယာကြိုးတပ်ဆင်ရန်နှင့် shell ကိုအတွက် fixate ။
ညှပ်သေပြီ-အဆုံးများပေါ်တွင် install နိုင်ပါတယ် anchoring ဝါယာကြိုး drop နှစ်ချက်သေပြီ-ဇာတ်သိမ်းကွန်ယက်ကို cable ကိုလမ်းကြောင်း။
fiber optic တစ်စက် cable ကိုဒီဇိုင်း cable ကိုစလစ်များနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိလုံလောက်သောဝန်ကိုဆီးတားခွင့်ပြု clamps ။
As FTTH clamp factory Jera is able to produce this ODWAC,ဆက်သွယ်ရေးညှပ် from metal and aluminum, upon the request from customer. We also have appropriate for ODWAC, FTTH pole accessories.
analog: ODWAC, ODWAC XL, FHD-ACC-CLMP910
ယခင်: Cable Down Lead Clamp, DLT
နောက်တစ်ခု: FTTH Drop Clamp, S-Type/ P-clamp
Drop ကြေးနန်း Clamp